Matthijs de Ligt Oo Dib U Saxaya Go’aankii Uu Ka Shaleeyay Ee Uu Barcelona Ku Diiday. – Gool24.Net
Matthijs de Ligt Oo Dib U Saxaya Go’aankii Uu Ka Shaleeyay Ee Uu Barcelona Ku Diiday.
Difaaca kooxda Juventus iyo xulka qaranka Netherlands ee Matthijs de Ligt ayaa 12 bilood kadib markii uu ka leexday Barcelona waxa uu hadda u furan yahay inuu Camp Nou kula biiro saaxiibkiisii hore ee Frenkie De Jong.
Barcelona ayaa suuqii xagaagii la soo dhaafay ku hungowday saxiixa Matthijs de Ligt kadib markii uu ka doortay kooxda Juventus laakiin De Ligt ayaa ka shalaynaya go’aankii uu Juventus ku doortay kadib hal xili ciyaareed oo dhibaato badan.
Matthijs de Ligt oo ay ku dagaalamayeen kooxaha Yurub ugu waa wayn oo dhan ayaa Juventus ugu biiray lacag qaali ah laakiin waxa uu awoodi kari waayay in uu qaab ciyaareedkiisii cajiibka ahaa ee Ajax u soo min guuriyo Turin.
Laakiin iyada oo hadda ay kooxaha Juventus iyo Barcelona ku jiraan wada xaajoodyo ay heshiisyo badan isku dhaafsan karaan ciyaartoy waxa uu Matthijs de Ligt u furan yahay in uu Barcelona xagaaga ku biiri karo.
Wargayska Mundo Deportivo ayaa shaaciyay in Barcelona ay markale xiiso u muujinayso Matthijs de Ligt oo kooxda Maurizio Sarri ee Juventus aan ku soo bandhigin qaab ciyaareedkii laga filayay.
Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in Barcelona ay kooxda Juventus wax ka waydiisay sida ay ku heli karto saxiixa Matthijs de Ligt halka taas badalkeeda ay Juventus kooxda Barcelona wax ka waydiisay Frenkie De Jong kaas oo ayna maamulka Barca u ah lama taabtaan.
Matthijs de Ligt ayaa loo arkaa mid ku soo bixi kara hanaanka ciyaareed ee kooxda Barcelona iyada oo halyaygii reer Holland ee Jaap Stam uu shaaciyay in sababta uu De Ligt ula qabsan waayay Juventus ay tahay in ay tahay koox ka hanaan ciyaareed duwan Ajax.
Jaap Stam ayaa ku dooday in haddii De Ligt uu ku biiri lahaa kooxaha Barcelona ama Manchester City in uu si sahlan u sal dhigan lahaa.
Laakiin hadda Barcelona ayaa kooxda Juventus ka warsatay xaalada De Ligt iyada oo labada kooxood ay wadaan qorshe ay ciyaartoy dhawr ah iskugu badalanayaan.